Zayọn na-amụghị nwa ga-enwe ọtụtụ ụmụ ndị nwoke (1-17)
Jehova bụ di Zayọn (5)
Jehova ga-akụziri ụmụ Zayọn ihe (13)
Ngwá ọgụ ọ bụla a kpụrụ ka e jiri lụso Zayọn ọgụ agaghị enwe isi (17)
54 Jehova kwuru, sị: “Nwaanyị aga,+ tie mkpu ọṅụ. Onye ime na-emetụbeghị,+ nwewe aṅụrị, tiekwa mkpu ọṅụ,+N’ihi na ụmụ nke nwaanyị di ya jụrụ dị ọtụtụKarịa ụmụ nke nwaanyị ya na di* ya bi.+ 2 Mee ka ụlọikwuu gị bukwuo ibu.+ Mee ka ákwà ụlọikwuu gị nke dị ebube sakwuo mbara. Akparala ya ókè. Mee ka ụdọ ụlọikwuu gị dị ogologo,Meekwa ka mkpọ́ ụlọikwuu gị sie ike,+ 3 N’ihi na ị ga-enwetakwu ala n’aka nri nakwa n’aka ekpe. Ụmụ gị ga-achị mba dị iche iche,Bichiekwa n’obodo dị iche iche e bibiri ebibi.+ 4 Atụla egwu,+ n’ihi na a gaghị emenye gị ihere.+ Ihere emela gị, n’ihi na a gaghị emechu gị ihu. N’ihi na ị ga-echefu ihere mere gị mgbe ị bụ nwata. Ị gaghịkwa echeta ihere e menyere gị n’oge niile ị bụ nwaanyị isi mkpe.” 5 “N’ihi na Onye Ukwu nke kere gị+ dị ka di* gị.+ Jehova nke ụsụụ ndị agha bụ aha ya. Onye Nsọ Izrel bụ Onye Mgbapụta gị.+ A ga-akpọ ya Chineke ụwa niile.+ 6 N’ihi na Jehova kpọrọ gị ka à ga-asị na ị bụ nwaanyị di ya hapụrụ, onye obi gbawara.*+ Ọ kpọkwara gị ka à ga-asị na ị bụ nwaanyị a lụtara n’agbọghọ, e mechaa jụ ya.” Ọ bụ Chineke gị kwuru ihe a. 7 “M hapụtụrụ gị,Ma, m ga-emere gị ezigbo ebere kpọlata gị.+ 8 Ezigbo iwe ka m ji wepụtụ ihu m ka ị ghara ịhụ m.+ Ma, m ga-emere gị ebere maka na m ga-ahụ gị n’anya* ruo mgbe ebighị ebi.”+ Ọ bụ Jehova, Onye Mgbapụta gị,+ kwuru ihe a. 9 “Ọ dị m ka oge Noa.+ Dị ka m ṅụrụ iyi n’oge ahụ na mmiri agaghị ekpuchi ụwa ọzọ,+Otú ahụkwa ka m ṅụrụ iyi na m gaghị eweso gị iwe, m gaghịkwa abara gị mba.+ 10 N’ihi na e nwere ike ime ka ugwu ukwu gharazie ịdị,Ugwu nta nwekwara ike ịma jijiji,Ma, m gaghị akwụsị ịhụ gị n’anya,*+Ọgbụgba ndụ udo mụ na gị gbara ga-adịgidekwa.”+ Ọ bụ Jehova, Onye na-emere gị ebere,+ kwuru ihe a. 11 “Nwaanyị nke nọ n’ahụhụ,+ onye oké ifufe na-ebugharị, onye a na-akasighịkwa obi,+M ga-eji ụrọ pụrụ iche doo nkume gị niile. M ga-ejikwa nkume safaya tọọ ntọala gị.+ 12 M ga-eji nkume rubi rụbichie ihe n’elu ụlọ gị niile. M ga-eji nkume na-egbuke egbuke* rụọ ọnụ ụzọ ámá gị niile. M ga-ejikwa nkume dị oké ọnụ* kpaa ókè n’ala gị niile. 13 Jehova ga na-akụziri ụmụ gị niile ihe.+ Ụmụ gị ga-anọkwa nnọọ n’udo.+ 14 A ga-eme ka ị bụrụ a kwaa a kwụrụ n’ime ezi omume.+ Ị ga-anọ ebe dị ezigbo anya n’ebe ndị na-emegbu mmadụ nọ.+ Ị gaghị atụ egwu ihe ọ bụla, ụjọ agaghịkwa atụ gị,N’ihi na e nweghị ihe na-emenye ụjọ ga-abịa gị nso.+ 15 Ọ bụrụ na onye ọ bụla alụso gị ọgụ,Ọ bụghị m gwara ya mee otú ahụ. Ị ga-emeri onye ọ bụla bịara lụso gị ọgụ.”+ 16 “Ọ bụ m kere onye na-akpụ ụ́zụ́,Onye na-afụ ekoWee kpụpụta ngwá ọgụ. Ọ bụkwa mụnwa kere onye na-ebibi ihe, ya ana-ebibi ihe.+ 17 N’ihi ya, ngwá ọgụ ọ bụla a kpụrụ ka e jiri lụso gị ọgụ agaghị enwe isi.+ Ị ga-amakwa ire ọ bụla ga-ebo gị ebubo ikpe. Ihe ọma ndị a ka ndị ohu Jehova ketara. Ha bụ ndị ezi omume n’anya m.” Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.+
^ Ma ọ bụ “onyenwe.”
^ Na Hibru, “onye ihe wutere na mmụọ.”
^ Ma ọ bụ “m ga-egosi gị ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “akwụsị igosi gị ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “na-enwu ọkụ.”